#kismaayo Ciidan kala taabacsan Dowladda iyo Raaskambooni oo Jubbada Hoose ku dagaalamay & Xildhibaan ka hadlay Ciidan kala taabacsan Dowladda iyo Ururka Raaskambooni, ayaa waxay barqanimadii maanta ay ku dagaalameyn Deegaanka Hoosingow ee Gobolka Jubbada Hoose. Ilaa iyo iminka si sax ah looma garanaayo waxa dhabta ah ee dagaaladaan dhaliyay, balse waxaa lagu soo waramayaa in labada Ciidan, ay maanta si weyn ugu dagaalameyn Deegaanka Hoosingow. Daryanka hubka waaweyn ayaa waxay maanta gil gileen Deegaanka Hoosingow, iyadoo khasaaraha ugu badan ay ka dhasheen madaafiic ay labada dhinac isweydaarsanayeen, iyadoo ilaa 14 ruux la sheegay inay ku dhinteen, halka laba gaarina ay ku gubteen. Wararka ayaa waxay sheegayaan inaysan dagaaladaan ka qeyb qaadan Ciidamada Kenya ee fariisimaha ku leh Deegaanka Hoosingow, laakiin waxaa la sheegay in la arkaayay madaafiic ka soo dhaceysay fariisimahooda. Xildhibaan Khaliif Xaaji Xasan oo kamid ah Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya ee ka soo jeeda Gobolada Jubbooyinka, ayaa wuxuu sheegay in dagaalo culus ay maanta ruxeyn Deegaanka Hoosingow. Xildhibaan Khaliif Xaaji Xasan oo wareysi gaar ah siiyay Idaacada Shabelle ee Magaalada Muqdisho, ayaa wuxuu sheegay inay wararka ku helayaan, in dagaaladaan ay ku dhnteen ilaa 14 askari oo labada dhinac ah. Xildhibaanka ayaa sheegay inaysan ka qeyb qaadan dagaaladaan Ciidamada Kenya, balse wuxuu ku eedeeyay in la arkaayay madaafiic xoogan oo ka soo dhaceysay fariisimahooda. Mr. Khaliif ayaa wuxuu tibaaxay in kolkii dambe ay Ciidamada Kenya ku soo baxeyn dagaalada, sidoo kalana wuxuu sheegay inay u kala dab qaadeen labadii Ciidan, ee wada dagaalamaayay. Ninka ka tirsan Mudanayaasha Baarlamaanka Soomaaliya, ayaa wuxuu ku baaqay in la qaboojiyo dagaalada khasaaraha badan ee ka dhacay Deegaanka Hoosingow, lagana wada shaqeeyo sida uu yiri xasiloonida | http://farayarenews somafarayarenews somalia @xjournalist i teach and speak english arabic ahmaric kiswahili somali and italiano i am a proff. Af languages journalist peace maker chairman of somali youth @xjournalist i teach and speak english arabic ahmaric kiswahili somali and italiano i am a proff. Af languages journalist peace maker chairman of somali youth path finders #kismaayo Ciidan kala taabacsan Dowladda iyo Raaskambooni oo Jubbada Hoose ku dagaalamay & Xildhibaan ka hadlay Ciidan kala taabacsan Dowladda iyo Ururka Raaskambooni, ayaa waxay barqanimadii maanta ay ku dagaalameyn Deegaanka Hoosingow ee Gobolka Jubbada Hoose. Ilaa iyo iminka si sax ah looma garanaayo waxa dhabta ah ee dagaaladaan dhaliyay, balse waxaa lagu soo waramayaa in labada Ciidan, ay maanta si weyn ugu dagaalameyn Deegaanka Hoosingow. Daryanka hubka waaweyn ayaa waxay maanta gil gileen Deegaanka Hoosingow, iyadoo khasaaraha ugu badan ay ka dhasheen madaafiic ay labada dhinac isweydaarsanayeen, iyadoo ilaa 14 ruux la sheegay inay ku dhinteen, halka laba gaarina ay ku gubteen. Wararka ayaa waxay sheegayaan inaysan dagaaladaan ka qeyb qaadan Ciidamada Kenya ee fariisimaha ku leh Deegaanka Hoosingow, laakiin waxaa la sheegay in la arkaayay madaafiic ka soo dhaceysay fariisimahooda. Xildhibaan Khaliif Xaaji Xasan oo kamid ah Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya ee ka soo jeeda Gobolada Jubbooyinka, ayaa wuxuu sheegay in dagaalo culus ay maanta ruxeyn Deegaanka Hoosingow. Xildhibaan Khaliif Xaaji Xasan oo wareysi gaar ah siiyay Idaacada Shabelle ee Magaalada Muqdisho, ayaa wuxuu sheegay inay wararka ku helayaan, in dagaaladaan ay ku dhnteen ilaa 14 askari oo labada dhinac ah. Xildhibaanka ayaa sheegay inaysan ka qeyb qaadan dagaaladaan Ciidamada Kenya, balse wuxuu ku eedeeyay in la arkaayay madaafiic xoogan oo ka soo dhaceysay fariisimahooda. Mr. Khaliif ayaa wuxuu tibaaxay in kolkii dambe ay Ciidamada Kenya ku soo baxeyn dagaalada, sidoo kalana wuxuu sheegay inay u kala dab qaadeen labadii Ciidan, ee wada dagaalamaayay. Ninka ka tirsan Mudanayaasha Baarlamaanka Soomaaliya, ayaa wuxuu ku baaqay in la qaboojiyo dagaalada khasaaraha badan ee ka dhacay Deegaanka Hoosingow, lagana wada shaqeeyo sida uu yiri xasiloonida – http://farayarenews somafarayarenews somalia @xjournalist i teach and speak english arabic ahmaric kiswahili somali and italiano i am a proff. Af languages journalist peace maker chairman of somali youth @xjournalist i teach and speak english arabic ahmaric kiswahili somali and italiano i am a proff. Af languages journalist peace maker chairman of somali youth path finders
#kismaayo Ciidan kala taabacsan Dowladda iyo Raaskambooni oo Jubbada Hoose ku dagaalamay & Xildhibaan ka hadlay Ciidan kala taabacsan Dowladda iyo Ururka Raaskambooni, ayaa waxay barqanimadii maanta ay ku dagaalameyn Deegaanka Hoosingow ee Gobolka Jubbada Hoose. Ilaa iyo iminka si sax ah looma garanaayo waxa dhabta ah ee dagaaladaan dhaliyay, balse waxaa lagu soo waramayaa in labada Ciidan, ay maanta si weyn ugu dagaalameyn Deegaanka Hoosingow. Daryanka hubka waaweyn ayaa waxay maanta gil gileen Deegaanka Hoosingow, iyadoo khasaaraha ugu badan ay ka dhasheen madaafiic ay labada dhinac isweydaarsanayeen, iyadoo ilaa 14 ruux la sheegay inay ku dhinteen, halka laba gaarina ay ku gubteen. Wararka ayaa waxay sheegayaan inaysan dagaaladaan ka qeyb qaadan Ciidamada Kenya ee fariisimaha ku leh Deegaanka Hoosingow, laakiin waxaa la sheegay in la arkaayay madaafiic ka soo dhaceysay fariisimahooda. Xildhibaan Khaliif Xaaji Xasan oo kamid ah Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya ee ka soo jeeda Gobolada Jubbooyinka, ayaa wuxuu sheegay in dagaalo culus ay maanta ruxeyn Deegaanka Hoosingow. Xildhibaan Khaliif Xaaji Xasan oo wareysi gaar ah siiyay Idaacada Shabelle ee Magaalada Muqdisho, ayaa wuxuu sheegay inay wararka ku helayaan, in dagaaladaan ay ku dhnteen ilaa 14 askari oo labada dhinac ah. Xildhibaanka ayaa sheegay inaysan ka qeyb qaadan dagaaladaan Ciidamada Kenya, balse wuxuu ku eedeeyay in la arkaayay madaafiic xoogan oo ka soo dhaceysay fariisimahooda. Mr. Khaliif ayaa wuxuu tibaaxay in kolkii dambe ay Ciidamada Kenya ku soo baxeyn dagaalada, sidoo kalana wuxuu sheegay inay u kala dab qaadeen labadii Ciidan, ee wada dagaalamaayay. Ninka ka tirsan Mudanayaasha Baarlamaanka Soomaaliya, ayaa wuxuu ku baaqay in la qaboojiyo dagaalada khasaaraha badan ee ka dhacay Deegaanka Hoosingow, lagana wada shaqeeyo sida uu yiri xasiloonida
Ciidan kala taabacsan Dowladda iyo
Raaskambooni oo Jubbada Hoose ku
dagaalamay & Xildhibaan ka hadlay
Ciidan kala taabacsan Dowladda iyo Ururka
Raaskambooni, ayaa waxay barqanimadii maanta
ay ku dagaalameyn Deegaanka Hoosingow ee
Gobolka Jubbada Hoose.
Ilaa iyo iminka si sax ah looma garanaayo waxa
dhabta ah ee dagaaladaan dhaliyay, balse waxaa
lagu soo waramayaa in labada Ciidan, ay maanta
si weyn ugu dagaalameyn Deegaanka
Daryanka hubka waaweyn ayaa waxay maanta
gil gileen Deegaanka Hoosingow, iyadoo
khasaaraha ugu badan ay ka dhasheen madaafiic
ay labada dhinac isweydaarsanayeen, iyadoo ilaa
14 ruux la sheegay inay ku dhinteen, halka laba
gaarina ay ku gubteen.
Wararka ayaa waxay sheegayaan inaysan
dagaaladaan ka qeyb qaadan Ciidamada Kenya
ee fariisimaha ku leh Deegaanka Hoosingow,
laakiin waxaa la sheegay in la arkaayay madaafiic
ka soo dhaceysay fariisimahooda.
Xildhibaan Khaliif Xaaji Xasan oo kamid ah
Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya ee ka
soo jeeda Gobolada Jubbooyinka, ayaa wuxuu
sheegay in dagaalo culus ay maanta ruxeyn
Xildhibaan Khaliif Xaaji Xasan oo wareysi gaar ah
siiyay Idaacada Shabelle ee Magaalada
Muqdisho, ayaa wuxuu sheegay inay wararka ku
helayaan, in dagaaladaan ay ku dhnteen ilaa 14
askari oo labada dhinac ah.
Xildhibaanka ayaa sheegay inaysan ka qeyb
qaadan dagaaladaan Ciidamada Kenya, balse
wuxuu ku eedeeyay in la arkaayay madaafiic
xoogan oo ka soo dhaceysay fariisimahooda.
Mr. Khaliif ayaa wuxuu tibaaxay in kolkii dambe
ay Ciidamada Kenya ku soo baxeyn dagaalada,
sidoo kalana wuxuu sheegay inay u kala dab
qaadeen labadii Ciidan, ee wada dagaalamaayay.
Ninka ka tirsan Mudanayaasha Baarlamaanka
Soomaaliya, ayaa wuxuu ku baaqay in la
qaboojiyo dagaalada khasaaraha badan ee ka
dhacay Deegaanka Hoosingow, lagana wada
shaqeeyo sida uu yiri xasiloonida
→ #kenyan soldiers killed several somali government soldiers in jubbaland today Ciidamada Kenya oo askar ka tirsan ciidamada dowladda ku laayay deegaanka Hoosingoow Sabti, June 15, 2013 Ciidamo ka tirsan kuwa Kenya ee ku sugan gobolka J/hoose islamarkaana qeybta ka ah howlgalka AMISOM ayaa lagu soo waramayaa in ay askar ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ku dileen deegaanka Hoosingoow ee gobolka J/hoose, kadib iska horimaad dhexmaray labada dhinac. Sida ay inoo xaqiijiyeen ilo wareedyo ku sugan deegaano ku dhow Hoosingoow, iska- horimaadkan ayaa yimid kadib markii ciidamada Kenya ay is-hortaag ku sameeyeen askar ka tirsan ciidamada dowladda oo doonayay in ay isaga tagaan deegaanka Hoosingoow, waxayna arintaasi keentay in labada dhinac uu dhexmaro iska-horimaad xooggan. Warar xog ogaal ah oo aynu ka heleyno deegaanka Hoosingoow ayaa sheegaya in labada dhinac ay isu adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan, waxaana iska horimaadkaasi ku nafwaayay askar ka tirsan ciidamada dowladda. Afar askari ayaa iska horimaadkaasi ku dhimatay sida uu xaqiijiyay sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda oo ku sugan gobolka J/ hoose. Isgaarsiintii deegaanka Hoosingoow ayaa hawada laga saaray, Ilaa imikana ma cadda khasaaraha rasmiga ah ee kala gaaray labada dhinac mana jiraan masuuliyiin ka tirsan ciidamada dowladda iyo kuwa Kenya oo faahfaahin ka bixiyay arintaasi. Dhacdadan ayaa kusoo beegmeeysa xilli dhawaan qeybo ka tirsan gobolka J/hoose ay soo gaareen ciidamo ka socda dowladda Siera Leone kuwaasoo qeyb ka noqon doona howlgalka ciidamada Midowga Afrika ay ka wadaan Soomaaliya.
← #kismaayo ) Waxaa shir ballaaran isugu yimid Guddi loo saarey sababaha dhaliyey iyo xalinta dagaalkii Kismaayo ka dhacay 7 -8 June 2013, Salaadiinta Jubba Land iyo waxagaradka, shirka ayaa ka dhacay garoonka diyaaradaha ee Kismaayo. Ugu horeyntii waxaa shirkaas ka hadley Prof.Maxamed Cabdi Ghaani oo madax u ahaa guddigaas, Ghandi ayaa sheegay in ay soosaareen qodobo ku aadan nabadeynta Kismaayo iyo cidii ka danbeysey dagaalka iyo sidii loo daba geli lahaa. Ghaandi ayaa sheegay in ay Kismaayo ku sugan yihiin muddo 4 maalmood ah isla markaasna ay arkeen dhamaan beelaha dega halkaas, waxaana aan kala doodney ayuu yiri saddex qodob oo kala ah: 1. In deegaanka nabad lagu soo dabaalo , cooladahana la soo afjaro 2. In la dhamaystiro nidaamka hadda socda ee Jubba Land 3. In la raadiyo oo la caddeeyo cidda masuulka ka ah dhibaatooyinkii dhacay ee dadku ku dhinteen Prof.Ghandi ayaa soo bandhigey dadkii ku dhintey iyo kuwii ku dhaawacmey dagaalkii, waxaana uu sheegay in aan laga hareyn dadkii ka danbeeyey dagaalkaas ee soo abaabuley loona gudbin doono hay’adaha ay khuseyso. gaandi ayaa si toos ah ugu eedeeyey dagaalkii Kismaayo in 95% ay Dowladda federaalka ee Muqdisha fadhidaa soo abaabushey. “In Dad ka badan 75 qof ay hal maalin dhintaan, 100 kalena ku dhaawacmaan, hanti badana ku burburto, dhibaatadaas iyada ah oo dhacdey, guddi ayaa la qaban, ururada xuquuqda aadanaha u dooda la horgeeyo oo ay daba galaan dadkii masuulka ka ahaa oo Maxkamad la keeno, marna ma dhicin intii Al-Shabaab laga xoreynaayey in maalin keliya 75 qof dhimato, 95% waxaa masuul ka ah dagaalkaas Dowladda Soomaaliyeed” prof.Maxamed Cabdi Ghandi Dowladdu waxay horey ugu dhawaaqdey in Kismaayo dagaal ka dhacaayo ayuu yiri Ghandi. Salaadiintii ka hadley shirkaas waxaa ka mid ahaa Ugaas Maxamed Ugaas Xaaji Ugaas Xirsi, Suldaan Cabdullaahi Cali Sonkor, waxaana ay isku raaceen in si wada jir ah loola shaqeeyo maamulka Jubba Land.